သေးငယ်သော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > သေးငယ်သော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
သေးငယ်သော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို စီးရီး သေးငယ်သော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် damper automation.The အပိုင်း အလှည့် ထုတ်ကုန် များမှာ ခွဲခြား သို့ ကွဲပြားခြားနားသော ကဏ္ဍများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် အဆိုပါ သမားရိုးကျ စီးရီး (AOX-R ကို ကို စီးရီး သေးငယ်သော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator) နှင့် ပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထား စီးရီး. အားလုံး အဆိုပါ စီးရီး များမှာ ရေးစပ် အားဖြင့် အဖွင့်အပိတ်, ပြောင်းလဲပစ် နှင့် ဉာဏ်ကောင်းသော ထုတ်ကုန်. ကျော်လွန် အဆိုပါ အနှစ် က hအဖြစ် အတွေ့အကြုံရှိ အမျိုးမျိုးသော လယ်ကွင်း ၏ နိုင်ငံတွင်း နှင့် ဘို့eign စျေးကွက် လေ့ကျင့်သည် နှင့် လြှောကျလှာ စဉ်တွင် ဆည်းပူး အဆိုပါ ဆုလာဘ် ၏ မျိုးစုံ အမျိုးသားရေး နှင့် interအမျိုးသားရေး အရည်အချင်းများ။
2. အပြည့်အဝရှဉ့်-လှောင်အိမ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာပူးတွဲ: AOX-R ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏မော်တာလျှပ်စစ် actuator လှည့်အမြင့်ဆုံးစတင် torque ကိုထုတ်လုပ်နှင့်အပူအပူလွန်ကဲရာမှကာကွယ်ပေးမယ့်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော induction motor ဖြစ်ပါတယ်။
AOX-R ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက် 3. က ISO 5211 mounting အခြေစိုက်စခန်းလျှပ်စစ် actuator turn: ISO5211 / DIN3337 မှတစ်ခွင်, လွယ်ကူသော mounting အခြေစိုက်စခန်းစံ။
အဆိုပါ actuator ၏လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအထူးသဖြင့်ကမ်းခြေနဲ့ပင်လယ်ပလက်ဖောင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, ရှုပ်ထွေးပြီးမတူညီဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုချေးအလွန်ခိုင်မာတယ်။ ချေးတားဆီးနှင့် actuator ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ် actuators ပြည်, ကမ်းခြေနှင့်ပင်လယ်ပေါ်မှာရှိပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်၏အသွင်အပြင်အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်ကိရိယာများကိုတင်းကြပ်စွာစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနှင့် AOX-R ကိုသေးငယ်တဲ့လေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-R ကိုသေးငယ်တဲ့လေးပုံတစ်ပုံ၏အသွင်အပြင်လျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံပေးသေချာနိုင်ပါတယ်။
Q: 100 ခန့်ကိုအပိုင်းပိုင်း AOX-R ကိုသေးငယ်တဲ့လေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်မဝယ်စေချင်ပေမယ့်ကျွန်မတဦးတည်းကြိုးစားကြည့်ချင် firist ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏တောင်းဆိုမှုကို၏ဘယ်လိုထင်သလဲ
Q: သင့်ရဲ့ AOX-R ကိုသေးငယ်တဲ့လေးပုံတပုံကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ် အကယ်. ငါပြီးနောက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့သင့်ရဲ့ quotation အများနှင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိနိုငျသညျ့အခါလျှပ်စစ် actuator turn?
hot Tags:: သေးငယ်သော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်